बलात्कारपछि हत्याको अर्को घटनाः बलात्कृत १४ वर्षीया बालिकाको हत्या रहस्यमय - Lekbesi Khabar
बलात्कारपछि हत्याको अर्को घटनाः बलात्कृत १४ वर्षीया बालिकाको हत्या रहस्यमय
महोत्तरी, असोज ४ । सोनमा गाउँपालिका– ८ सिंग्हासिनीकी १४ वर्षीया कविताकुमारी यादवको बलात्कार र हत्या भएको २३ दिन बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका पाँचैजनालाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ ।
सिंग्हासिनीका रामएकवाल यादवकी १४ वर्षीया छोरी कविता १२ भदौदेखि हराएकी थिइन् । उनको शव १४ भदौमा गाउँकै रामजानकी कुटीस्थित इनारमा भेटिएको थियो । सो दिन नै प्रहरीले सो ठाउँका रामजीवन राउत कुर्मीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
स्थानीयले कवितालाई उनी हराएकै दिन रामजीवनसँग उखुबारीमा देखेको बताएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । कविताका बाबु रामएकवालले रामजीवनले नै हत्या गरेको किटानी जाहेरीसमेत दिएका थिए ।
रामजीवन पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । पक्राउ परेका अन्य चारजनालाई भने प्रहरीले प्रत्येकसँग एक लाख धरौटी लिएर छाडेको थियो । तर, पाँचै अभियुक्तले सफाइ पाएका जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार महेन्द्र झाले बताए ।
कविताको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले अदालतमा पनि अपहरण, बलात्कार र हत्याको मुद्दा चलाएको थियो ।
अभियुक्तहरूले सफाइ पाएपछि पीडित परिवारले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । बाबु रामएकवालले आफूहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी र अदालत दुवैले हामीलाई भरोसा हुने गरी न्याय दिनुपर्छ, हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
सजायभन्दा सफाइ पाउने बढी
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले जबर्जस्ती करणीको चार मुद्दा फैसला गरेको थियो । तीन मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाए । जिल्ला अदालतमा अझै बलात्कारका १७ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा नै जबर्जस्ती करणी उद्योगका पाँच मुद्दा फस्र्र्योट भए । सात मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । अधिकांश मुद्दामा यथेष्ट सबुत प्रमाण नहुँदा अभियुक्तहरूले सफाइ पाइरहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदीप दंगालको भनाइ छ ।
सबै अभियुक्तले पाए सफाइ
प्रहरीले हत्या अभियोगमा पाँचजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा चलाइएका रामजीवन राउत कुर्मी, गौरीशंकर राउत कुर्मी, दशरथ राउत कुर्मी, राम श्रेष्ठ महतो र नवीनकुमार महतोले सफाइ पाएका हुन् । रामजीवन, गौरीशंकर र दशरथ दाजुभाइ हुन् भने राम र नवीन बाबुछोरा हुन् । प्रहरीले रामजीवनलाई शव भेटिएकै दिन नियन्त्रणमा लिएको थियो । बिहीबारको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
४ आश्विन २०७५, बिहीबार ०७:१३ September 20, 2018
होटल व्यवसायीले कुखुराको भालेलाई रङ लगाईदिएपछि !
पर्साबाट ५५ सीमा स्तम्भ गायब !
कोरोनाले बेलायतमा एक नेपालीको ज्यान लियो !